सात दिनभित्रमा तपाइको मनले चिताएको काम बन्नेछ, ॐ लेखि संसार,भर सेयर गरौं ! | धर्म / संस्कृत
सात दिनभित्रमा तपाइको मनले चिताएको काम बन्नेछ, ॐ लेखि संसार,भर सेयर गरौं !
June 8, 2021 NepstokLeaveaComment on सात दिनभित्रमा तपाइको मनले चिताएको काम बन्नेछ, ॐ लेखि संसार,भर सेयर गरौं !
तपाइको भित्रि मनले देखेको 30 सेकेण्ड भित्रमा शेयर गर्नुहोस ।७ दिन भित्रमा तपाइले नसोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवस्ता नगर्नुहोला !!!
परापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलि’ङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन । अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना साना—साना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिं’गलाई पुजा गर्छन् ।सबैलाई संस्कृतको ज्ञान पनि हुँदैंन ।
के तपाइलाई थाहा छ, एक मुखे रुद्राक्षको दर्शन गर्नाले नसोचेको ठाउँबाट धन लाभ हुन्छ भन्ने मान्यता पनि रही आएको छ । कमेन्टमा ॐ लेखेर शेयर गर्नुहोस ३ दिन भित्र आक’स्मिक धन लाभकाे योग हुनेछ । बेवास्ता गरेमा “अशुभ” हुन सक्ला । एकमुखे रुद्राक्ष यसको वर्णन शिवपुराणको रुद्राक्ष महात्म्यमा पाउन सकिन्छ । यसलाई शिवको प्रतीक पनि मानिन्छ । अत्यन्तै दु’र्लभ तर शक्तिशाली हुनाले यसलाई अनमोल वरदान पनि मानिन्छ ।
हरेक ब्यक्तिले निदाएको बेला फरक फरक सपना देख्ने गर्दछन्। धार्मीक मान्यता अनुसार हर सपनाको केहि न केहि अर्थ रहने गर्दछ ! यस प्रकारका सपनाले ब्यक्तिको जीवनमा घट्ने घटनाको अग्रीम जानकारी गराउने समेत मान्यता छ।
यी ६ राशिका युवतीः जसले भेटने गर्दछन असिमित प्रेम गर्ने धनवान श्रीमान !
April 9, 2021 April 9, 2021 Nepstok